वर्तमान गतिरोधलाई अन्त्य गर्न सबैको प्रयास केन्द्रित हुनुपर्छ : पूर्वराष्ट्रपति - हरियाली नेपाल
कोरोना # काँग्रेस महाधिवेशन #राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड # राप्रपा महाधिवेशन सर्वोच्च ‘प्रचण्ड’ माओवादी केन्द्र
वर्तमान गतिरोधलाई अन्त्य गर्न सबैको प्रयास केन्द्रित हुनुपर्छ : पूर्वराष्ट्रपति
रासस २०७८ पुष २४, शनिबार
काठमाण्डौः पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवले जनताको प्रतिनिधिले बनाएको संविधानमाथि पछिल्ला चार वर्षमा बारम्बार आक्रमण भइरहेको बताउनुभएको छ । आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा चन्द्रदेव जोशीद्वारा लिखित ‘माक्र्सवाद र विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन’ पुस्तकको विमोचन गर्दै उहाँले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद् विघटन गरेर संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरेको बताउनुभयो । “राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर दुई–दुई पटक संविधानलाई खत्तम गर्न खोजियो, सदनमाथि आक्रमण गरियो”, उहाँले भन्नुभयो ।
जनताको सङ्घर्षको बलमा जारी संविधानले खडा गरेका संस्थाले संविधानलाई जोगाउन पहल गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उहाँको गुनासो थियो । “यसलाई मजबुद बनाउनका साटो प्रहार गर्ने काम भयो”, गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति यादवले भन्नुभयो ।
जिम्मेवार व्यक्तिबाट बारम्बार प्रहार गरिएको संविधान जोगाउन पाँच दल, नागरिक समाज, नेपाली जनता र अदालतले बचाएको बताउनुभयो । पछिल्ला समय न्यायालयमा देखिएको विकृतिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले मुलुकमा सुखद् सङ्केत नदेखिएको बताउनुभयो । “अदालतमा यो स्थिति छ, संसद्मा त्यो स्थिति छ, यो व्यवस्थालाई बचाएर लैजान राष्ट्रपतिको के कर्तव्य छ, सरकारको के दायित्व छ ? सरकारले राज्यको कार्यकारिणीको दायित्व छ, राजनीतिक दललाई एक ठाउँमा राखेर छलफल गरेर अदालतलाई कसरी चलाउने ? प्रतिनिधिसभालाई कसरी अगाडि लैजाने ? सम्पूर्ण समस्याको समाधान गर्ने थलोलाई बन्धक बनाएर राखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले वर्तमान राजनीतिक गतिरोधलाई अन्त्य गर्र्दै उन्नत समाज निर्माणमा सबैको प्रयास केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो । राजनीतिक दलहरूमा देखिएको विचलन र भ्रष्टीकरणले नेपाली जनता सन्तुष्ट नभएको उहाँको भनाइ थियो । लोकतान्त्रिक र वामपन्थी शक्ति मिलेर नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भएको उहाँले बताउनुभयो । पुस्तकमाथि डा इन्दिरा अधिकारी, डा हरि रोका र डा सुरेन्द्र केसीलगायतले समीक्षा गर्नुभएको थियो ।
सार्वजनिक सवारीमा लागु भएको जोर-बिजोर प्रणाली हटाउने प्रसासनको निर्णय (पूर्णपाठ)
राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री देउवाबीच एकघण्टा गोप्यवार्ता
राष्ट्रियसभा निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिकः १८ सिटमा सत्तागठबन्धन १ सिट एमाले बिजयी (नामावलीसहित)
सत्ता गठबन्धनद्वारा संयुक्त अपिल
आर्थिक वृद्धिदर गत वर्षको भन्दा माथि हुने प्रधानमन्त्री देउवाको अनुमान
प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन (पूर्णपाठ)
राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा २१ बुँदे मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्न आयोगको आग्रह (सूचीसहित)
विद्यार्थीलाई खोप लगाउन माघ १६ देखि २० गतेसम्म विद्यालय खोल्ने सीसीएमसीसीकाे निर्णय